ဇော်ဝင်းထွဠ်တို့လေးဖြူတို့နဲ့ အရွယ်ရောက်ခဲ့တယ် အခုကျတော့ အခုလို mono လို့ခေါ်မလား ခံစားတတ်လာတယ် သီချင်းရဲ့စတိုင်တွေကတော့ ခေတ်အလိုက်ပြောင်းနေမှာဘဲ အရင်ခေတ်က သီချင်းတွေက အကြောင်းအရာ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေ အခိုင်းအနှိုင်းေ တွေပိုကောင်းပြီး ဖန်တီးသူတွေဟာ မြန်မာစာကို အဆင့်မြင့်မြင့် တတ်မြောက် သူတွေလို့ ခံစားရပါတယ် နှစ်သက်ပါတယ် ကိုလွန်းဆွေ။အားနာပါတယ်။ အသဲတစ်ခြမ်းကိုလွမ်းဖို့ သိမ်းထားမယ် တွေလဲ အင်မတန် ကောင်းပါတယ်
ကြိုက်တယ် ဘယ်အချိန် နားထောင်နားထောင် ကောင်းပါတယ်။
i like this song so much!"တင်တင်မြ - ချစ်သူတို့ လျှောက်သော လမ်းကလေး"It can feel love!
မိုးမခ myanmar news websites
အားကစား international news
09/30 - 10/07 (36)
10/14 - 10/21 (38)
01/22 - 01/29 (42)
02/05 - 02/12 (48)
02/19 - 02/26 (46)
02/26 - 03/04 (41)
06/10 - 06/17 (41)
08/19 - 08/26 (34)
11/11 - 11/18 (32)
12/23 - 12/30 (36)
03/24 - 03/31 (37)
07/14 - 07/21 (38)
06/22 - 06/29 (82)
06/29 - 07/06 (75)
07/06 - 07/13 (69)
07/20 - 07/27 (37)
08/24 - 08/31 (26)
11/16 - 11/23 (34)
၁၉၇၀ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက် (လွတ်လပ်ရေးနေ့) တွင် မွေးဖွား။ ၁၉၉၅ တွင် ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) မှ M.B.,B.S ဘွဲ့ရ။ ၁၉၉၆ စက်တင်ဘာမှ ၁၉၉၇ ဖေဖော်ဝါရီအထိ ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်း ဖွင့်။ ၁၉၉၆ နိုဝင်ဘာမှ ၂၀၀၅ ဇွန်အထိ မြားနတ်မောင်မင်္ဂလာမဂ္ဂဇင်းတွင် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာအဖြစ် ဆောင်ရွက်။ ၂၀၀၅ ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် လွတ်မြောက်နယ်မြေသို့ ရောက်ရှိ။ ၂၀၀၆ ဇန်န၀ါရီမှ ၂၀၁၄ ဧပြီအထိ မဲဆောက်အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်များအသင်းတွင် ဒု-ဥက္ကဌ၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်၊ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့။ ရွှေဝါရောင်သံဃာများ မေတ္တာပို့ စီတန်းလမ်းလျှောက်သည့် ၁၈-၉-၂၀၀၇ တွင် ဘလော့ဂ်တင်ဆက်မှု စတင်။ Subscribe To
ဧရာဝတီ ကံသ်ကညံ မာယာမဂ္ဂဇင်း